Soo-saaraha dareeraha heerkulka IR Shiinaha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka > Dareeraha heerkulka IR
Mowjad gaaban on heerkulbeegga infrared infrared
Soo Koobida Heerkulbeegga Internetka ee 'infrared' Heerkulbeegga infrared waxaa loo isticmaali karaa, iyada oo aan la taaban sheyga, loo xisaabiyo heerkulka dusha sare ee shayga iyada oo loo sii marayo xoojinta infraredradiation-ka uu shaygu soo daayay, oo si dhakhso leh ayuu u cabbiri karaa walxaha ay adag tahay in loo dhowaado ama laga dhaqaaqo dis dheer ... ..
Heerkulbeegga internetka ee infrared
Soo Koobida Heerkulbeegga Khadka Tooska ah ee ShortwaveType Heerkulbeegga infrared waxaa loo isticmaali karaa, iyada oo aan la taaban shayga, lagu xisaabiyo heerkulka dusha sare ee shayga iyadoo la adeegsanayo shucaaca infrared infrared ee uu shaygu ka sii daayo, isla markaana si dhakhso leh u cabbiri karaya walxaha ay adag tahay in loo dhowaado ama la dhaqaaqo ......
Heerkulbeeg sare oo sax ah
Soo Koobida Heerkulbeegga-Sare-Sare-Kooban Heerkulbeegga infrared waxaa loo isticmaali karaa, iyada oo aan la taaban shayga, lagu xisaabiyo heerkulka dusha sare ee shayga iyadoo la adeegsanayo shucaaca infrared ee xoogga leh ee shayga ka soo baxa, isla markaana si dhakhso leh u cabbiri karaya walxaha ay adag tahay in loo dhowaado ama laga dhaqaaqo a ... ...
Nooca Shortwave heerkulbeegga infrared infrared
Heerkulbeegga infrared waxaa loo isticmaali karaa, iyada oo aan shayga la taaban, lagu xisaabiyo heerkulka dusha sare ee shayga iyada oo loo marayo xoogga shucaaca infrared ee uu shaygu soo daayay, isla markaana uu si dhakhso leh u cabbiri karo walxaha ay adag tahay in laga dhawaado ama laga dhaqaaqo masaafo dheer. codsatay in lagu cabbiro heerkulka dusha sare ee walxaha birta dhalaalaya ama la safeeyay, waxayna leedahay saameyn ku habboon cabbirka heerkulka kuleylka kuleylka kuleylka ah ama milicsiga.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka IR soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka IR kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.